May 4, 2021 - Cele Fans
မကြာမီ ဘဏ်တွေ ပြိုလဲသွားနိုင်လားမေးရင် ? ?
May 4, 2021 Cele Fans Comments Off on မကြာမီ ဘဏ်တွေ ပြိုလဲသွားနိုင်လားမေးရင် ? ?
ဘဏ်တွေ ပြိုနိုင်လားမေးရင် နောက်နှစ်လကနေ ခြောက်လထိ စစ်ကောင်စီကို ဖြုတ်မချနိုင်ရင် ပြိုတယ်။သေချာပေါက် ပြိုတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ ငွေစက္ကူနဲ့ လေစက္ကူဆိုတာ ရှိတယ်။ ငွေစက္ကူဆိုတာက ရှင်းလင်းပါတယ်။ ငွေသားရိုက်ထုတ်ထားတဲ့ ပမာဏပါ။လေစက္ကူဆိုတာက ငွေစက္ကူကို နှစ်ပေါင်းများစွာ လည်ပတ်စီးဆင်းရာကနေ နိုင်ငံစီးပွါးရေးအဖြစ် ဖြစ်တည်လာတဲ့ နိုင်ငံ့ငွေကြေး ပမာဏပါ။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ ငွေစက္ကူဟာ နိုင်ငံငွေကြေး..ပမာဏရဲ့ 8.3% ပဲ ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ မဟုတ်။ ဒါ တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ Ratio ပါပဲ။ […]
May 4, 2021 Cele Fans Comments Off on လမ်းပေါ်မှာဖုန်းစစ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ…
( လမ်းပေါ်မှာဖုန်းစစ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ရှေ့နေသူငယ်ချင်းရဲ့ အကြံပေးချက်ပါ။ သေချာဖတ်ထားကြပါ။ ) လမ်းမှာ တွေ့တဲ့သူ ရပ်ခိုင်းပြီးဖုန်းတွေ စစ်တယ်လို့သတင်းတွေကြားတယ်ဗျ၊ အဲ့ဒါ စောက်ပြသနာအကြီးကြီးရှိတယ်၊ (ဖုန်းထဲက အချက်အလက်ပေါ်မူတည်ပြီး တပ်ချင်တဲ့ ပုဒ်မတပ်လို့ရသွားပြီ) ဥပဒေနှင့်အညီတွေဘာတွေ အယုံအကြည်မရှိတော့ပေမယ့် လိုအပ်လို လိုအပ်ငြား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း အကြံပေးပါ့မယ် လုပ်ရမှာကတော့ ၁။ ဖုန်းကို pattern lock ချထားပါ , face id တွေ လက်ဗွေတွေ မလုပ်ထားပါနဲ့ […]
May 4, 2021 Cele Fans Comments Off on စိုးရိမ်စရာ မုန်တိုင်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်လာတော့မလား
မုတ်သုန်ခေါ်လာနိုင်သောမုန်တိုင်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်လာတော့မလား မုန်တိုင်းတစ်ခုရဲ့ဖြစ်စဉ်အစကို လေ့လာကြည့်ရင်လေထုဖိအားကျဆင်းနေရမယ် လေထုမညိမ်သက်မှု့တွေဖြစ်နေရမယ် ဒီဖြစ်စဉ်အနေအထားတွေကတော့လက်ရှိလေထုလှုပ်ရှားမှု အနေအထားအရကပ္ပလီပင်လယ် တောင်ဘက်မှာ ပြည့်စုံနေပါပြီ ဒါဆိုရင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းဖြစ်ဖို့မေလ ပထမအပတ်လောက်မှာ ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိလာနိုင်တယ်။ နောက်ကျလွန်းရင် နှစ်ရက်ပေါ့။‌အဓိကက လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းစဖြစ်လာရင်တော့ မုန်တိုင်းဖြစ်ဖို့ သေချာပါပြီး။ ဒီမုန်တိုင်းက- ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ- ရန်ကုန်တိုင်း- မွန်ပြည်နယ်တို့ အတွက် စိုးရိမ်စရာတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ် အဓိကကတော့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသပေါ့။ မုန်တိုင်းဖြစ်လာရင်တော့အနောက်တောင်မုတ်သုန်ကိုလည်းခေါ်လာနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် တနင်္သာရီတိုင်းဘုတ်ပြင်းဘက်မှာ စောစောဝင်လာနိုင်တယ်။ မုန်တိုင်း ဖြစ်လာရင်လည်းဆိုင်ကလုန်အဆင့်ထိဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်နှင့်ကြိုတင်သိရှိနိုင်အောင် မုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ခြေကိုကြိုတင်အသိပေးလိုက်ပါတယ်။ […]
May 4, 2021 Cele Fans Comments Off on ကျွန်တော်တို့က အရံတပ်ခွဲတွေပါ မြို့တွင်းလုံခြုံရေးယူပေးပါမယ်
ဥပေဒနဲ႔အညီ ျပည္သူကို ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေပးပါမယ္ ကိုယ့္အိမ္ထဲမွာပဲေနေပးၾကပါ ပူးေပါင္းမဲ့လူငယ္ေခါင္ေဆာင္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီးပါၿပီ ျပည္တြင္းၿငိမ္ခ်မ္းေရးလက္နက္ကိုင္ေတြပါပါမယ္အရမ္းမေၾကာက္ၾကပါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အသက္ရွင္ေန သမၽွေနအိမ္ထဲကလူေတြေဘး မျဖစ္ေစရပါဘူး ဆန္နဲ႔ဆီေလာက္ပဲေဆာင္ထားပါ၊အပိုအလိုေတြဝယ္မစုပါနဲ႔၊ ျပဴတင္းေပါက္နားကိုေခ်ာင္းမၾကည့္ပါနဲ႔၊ေၾကာက္ရြံမႈကိုမျပပါနဲ႔၊ေဒါသကိုထိန္းပါ၊ပုံမွန္အေနအထားနဲ႔ပဲ စကားေျပာဆိုပါ၊အကူအညီေတာင္းရမဲ့နံပါတ္ေတြ CRPH နဲ႔ ယုံၾကည္ရသူေတြဆီကရပါလိမ့္မယ္။ ပစ္ခတ္သံၾကားရင္ အိမ္အတြင္းခန္းမွာခိုေအာင္းပါ၊အသံရပ္ဆဲမွ ဖုန္းဆက္ေမးပါ၊ဖုန္းလိုင္းျဖတ္ေတာက္ထားပါက အိမ္နီးနားခ်င္းအားေမးပါ၊သတင္းကိုအတည္ျပဳပါ၊ေကာလဟာလ ဝါဒျဖန႔္တာေတြကို ရမ္းမယုံပါႏွင့္၊9 Band radio တစ္လုံးေဆာင္ထားပါ၊ကေလးသူငယ္မ်ားအား ရိုက္ႏွက္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမျပဳပဲ ေခ်ာ့ေမာ့ပါ၊အသံမထြက္ပါေစႏွင့္။ ဒလန္ဟုသံသယရွိသူမ်ားအား စာရင္းခ်ေရးမွတ္ထားျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ပဲ အလြတ္က်က္ထားေပးပါ၊ေျပာက္က်ားစနစ္စတင္ေနပါၿပီ။ၿပီးလၽွင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားေရာက္လာပါမည္၊ခန႔္မွန္းကာလ ၃ပတ္ၾကာျမင့္နိုင္ပါသည္။ စစ္ေကာင္စီအုပ္စုမွလြဲ၍ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမၽွ နစ္နာစရာတခုမွ […]
May 4, 2021 Cele Fans Comments Off on သမ္မတ Biden ရန်လိုတဲ့မူဝါဒ ကျင့်သုံးနေတယ်လို့ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် စွပ်စွဲ
အမေရိကန်သမ္မတ Joe Biden ဟာ ရန်လိုတဲ့မူဝါဒကို ကျင့်သုံးနေတယ်လို့ မြောက်ကိုရီးယားက စွပ်စွဲလိုက်ပြီး အမေရိကန်ရဲ့ အတုအယောင် သံတမန်ရေးနည်းလမ်းကို ပယ်ချရင်း လက်တုံ့ပြန်မှု လုပ်သွားမယ်လို့ တနင်္ဂနွေနေ့က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ နျူကလီးယား အစီအစဉ် ခြိမ်းခြောက်မှုကို သံတမန်ရေးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းဖို့ သူ့အစိုးရက ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားဖွယ် ရှိပြီး တဖက်မှာလည်း ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို ဟန့်တားသွားမယ်လို့ သမ္မတ Biden က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက် မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ တုံ့ပြန်ချက် […]